Aiza no ahitako ny Red Bull Rampage? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Rivotra mena mitobaka mivantana - ny fomba hiatrehana
Rivotra mena mitobaka mivantana - ny fomba hiatrehana
Aiza no ahitako ny Red Bull Rampage?
Ianao dia afakamijery Red Bull Rampage2019 mivantanaRed BullTV.23 Okt 2019
Nisy ve ny Redbull Rampage 2020?
2020 Red Bull Rampagenofoanana 1
Ny iray amin'ireo hetsika bisikileta an-tendrombohitra malaza indrindra dia nofoanana tamin'ity taona ity, nifantoka tamin'ny fiverenan'ny 2021 kosa. Nandritra izay 19 taona lasa izayRampage Mena Menadia nampivondrona atleta freeride lehibe indrindra eran'izao tontolo izao hifaninana amin'ny sehatra mahavariana iray.2 Sep 2020
Ity, ny mpihaino ahy, dia ny Red Bull Hardline, iray amin'ireo hazakazaka midina ambany indrindra eto an-tany. Ity taranja ity dia manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny fitsambikinana lehibe ka hatramin'ny fizarana mihanjahanja. Ho hitako ny halehiben'ireto zavatra ireto sy ny hafainganan'ny famelezana ireo goavambe goavambe ireo, koa ampidiro amina isa ny laharam-pahamehiko Red Bull. (Mozika rock mafy) (mozika piano manentana) - mackerel masina sy masina! Ity zavatra ity, tsy miteny aho, azo antoka fa mandroaka anao any anaty ala mainty io, midina amin'ilay làlambe izay heveriko fa hadalana ny hafainganam-pandehany, gaga be aho fa lehibe tokoa io zavatra io, io .. .
Ahhh, adala aiza ny fandrefesana ny kasipeo? , aiza ilay izy? Eny, toerana mamy any, any no hiafaran'ireo tovolahy. Ary hiverina amin'ny valiny avy hatrany aho. Wow, saika lany kasety aho. (mihomehy) Rehefa heverinao fa tsy maintsy mivoaka avy hatrany amin'ny fiatoana ianao amin'ity faritra mivalona ity, 57 metatra! Be dia be ity, misy ny rivotra, ka mila mandeha haingana kokoa ianao mba hanidiana izany banga izany. (mozika piano faly) Eny teknika kely ity fidinana ity.
Tena goavambe izy io, saingy fidinana miadana kosa ianao, fantatrao fa tsy fidinana hafainganam-pandeha avo lenta izany, rehefa mandeha haingana ianao dia miantsona ary ny tanjaky ny fiainanao dia atosika amin'ny bisikileta ary hipetraka any amin'izay hametrahanao haavo avo toa an'ity ary tany ary ny zavatra rehetra dia mandalo ny vatanao. Ny fanontaniana dia hoe ohatrinona lehibe io fidinana io? Ka ho azoko ny momba an'izay betsaka ary alefako eto izy ireo, marina, ka tokony ho eo amin'ny haavon'ny toerana hiainganao, 11 metatra io, omeo na alao, 2 metatra eo amboniny, ka 13 metatra mankany amin'ilay toerana mamy amin'ity iray ity Mitete. Mitete be dia be izy io, karazana tsy lavitra.
Mety handeha tongotra valo metatra ianao. (Fifalian'ny piano) Marina, tsy lehibe noho io fidinana io amin'ilay dingana lehibe vao nojerentsika, fa ny zava-drehetra dia somary lehibe amin'ity taranja ity, tsy misy zavatra kely eto. Ka hiezaka aho hametraka izany amin'ny fomba fijery.
Ity dia dingana lehibe iray mankany amin'ny berm lehibe iray, midina dingana lehibe midina ilay berm, hiantso an'i Steve aho, hanampy ahy izy, hitazona izany faran'ny kasety izany izy. Okay, Steve, iray amin'ireo marshals amin'ity fizarana ity. Hidina any aho haka ny tarehimarika. (Tape squeaks) Mety misy teboka mamy aho. 45 metatra! (mozika piano manentana) Marina, misy sakana roa mampiavaka azy roa tsy hiala amin'ity taranja ity.
Indrindra ity, eny, ity ny The Big Step Up. Ary tena faly aho mahita ny hafaingam-pandehanao, ary mety manontany tena ianao hoe faingana tokoa ianao no nanao an'io hitsambikina io, azoko, manana iray amin'ireo masinina kely ireo aho eto izay mampiseho ny hafaingam-pandehanao, izaho mahazo torolàlana haingam-pandeha mafy momba ny hafainganan'ny fainganan'izy ireo handeha hahatratra izany. Ary avy eo dia homeko isa ianao, apetraho amin'ny fomba fijery ity zavatra ity, lehibe, hafiriana? hatraiza ny halehiben'ny zava-kendrenao.
Wow, 40, antonony izany. Ny tiako holazaina dia ny fanaovana azy 40, 41, tena tsara izany. Nisy lakilasy lehibe mihoatra ny 41, ka primitive - andao hanao an'ity. (Mihoby ny vahoaka) Ohh, andao ary! Jereo izany, miverina, 40.
Mitaingina bisikileta 100 kilaometatra
Izany no hafainganam-pandeha handray io mitsambikina io. Haingam-pandeha izany, indrindra amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, noho izany dia natsofoko tsara izany, apetraho ao ny refy fandrefesana ary horefesiko ny halavan'ity fitsambikinana ity satria goavana io. Ka andao ary. (Tape squeaks) 45 metatra.
Saingy 11 metatra miala ny tany ity mpandeha kicker ity. Niakatra ianao, mety ho 8 metatra, ary avy eo manana an'ity cas ity ianao. Ka eo ianao dia manana takelaka misy tongotra 6, kapila fito tongotra alohan'ny hahatongavanao amin'ny toerana mamy, noho izany dia be ny lesoka - be ny toerana ho an'ny hadisoana rehefa tsy manana ny hafainganana ianao rehefa afaka 38 mph You ampiasao pad case ity. (mozika falifaly) Ity no lalana mankany amin'ny toerana tiako hiantsoana ny endrika Hollywood an'ny Red Bull Hardline.
Io elanelana be eny an-dalana io, saingy manahy ny amin'ny farany aho. Jereo izany! Mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ianao ary avy eo manana ny berm any ambany hisambotra anao. Malemy ny lohaliko eto, lehibe io.
Fa hiezaka ny handrefy izany araka izay azo atao aho. Ka ny hataoko dia apetraho amin'ny sisiny. Eny ary, hofeheziko eto fotsiny io ary ho hitako ara-bakiteny, Sayonara! (fihomehezana mihomehy) Sayonara a! Eny ary, marina, noho izany amin'ity ambaratonga ity dia misy 20 metatra.
Mba hametrahana azy io amin'ny fomba fijery somary misimisy kokoa, noho izany ny haben'ny habeny dia mety hanampy 6 metatra hafa izy ka 26 metatra avy eo ambony ka hatrany amin'ny arabe. Saingy avy eo ny làlan'ny mpamily mandeha mamaky ny rivotra (kasika kasety) toa ny 3 metatra ambanin'ny ambany daholo izy ireo. Ataoko angamba hoe aiza no misy ny toerana mamy rehetra, any.
Manodidina ny 55 metatra avy eo an-tampony any, mankany, wow! (Mozika Piano mahery vaika) Marina, ity no sakana farany amin'ity taranja ity ary fitsambikinana lava sy sarotra be izy io. Miala amin'io fihodinana maitso io ianao, somary mivoaka ny efitrano, fa tsy maintsy mitazona izany hafainganam-pandeha izany ianao hifampiraharaha tanteraka amin'ity fitsambikinana rehetra ity. Haingam-pandeha izy io, ka manomboka amin'ny toerana mamy ka hatramin'ny toerana mamy, dia refesiko ary homeko topy maso ny halehiben'ilay zavatra, ka esory eto ny fatran'ny kasety. (Tape squeaks) Ataoko fa eo ilay toerana mamy, fa mitsambikina.
Okay. 50 metatra - 52 metatra, heveriko fa tsy te hiafara amin'ny tampony ianao, ka 52 metatra miala eo. Oay! Ka tohizo, Mazava ho azy fa Red Bull Hardline misy isa vitsivitsy natsipiko tao an-tsaiko fa nomeko anao ny fahalalanao bebe kokoa momba ny halehiben'ireto zavatra ireto sy ny hafirianao handeha hamely ireo sakana ireo eny amin'ity làlana ity.
Fa raha te hahita lahatsoratra iray hafa ianao dia tsindrio eto raha handresy amin'ny bisikileta nandresy tamin'ny taon-dasa, Burnacha, ary raha te-hahita lahatsoratra mahafinaritra hafa ianao dia tsindrio eto raha ho an'i Andriamatoa Martyn Ashton i Whistler, izany dia horonantsary mampihena anao. toy ity iray ity isan'andro amin'ny herinandro. Ary aza adino raha tianao ity lahatsoratra ity dia omeo ankihibe toy izany.
Tena misy ve ny Red Bull Rampage?
Ny hetsika lehibe freeride an-tendrombohitra lehibe indrindra amin'ny fanatanjahantena,Rampage Mena Mena, vonona ny hiverina amin'ny 2021. Ny fitokananaRampage Mena Menadia natao tamin'ny 2001, ary nanomboka teo, hetsika 14 samihafa sy mpandresy 9 samihafa no nanondro ny toerany ao amin'ireo boky tantara.
Mandra-pahoviana ny Red Bull Rampage?
Amin'ny ankapobeny dia misy telo andro fihadiana fotsinyRampageary efatra andro fanampiny handehanana amin'ny bisikiletany hitsapana ny tsipika sy hitsambikina. Amin'izay efatra andro farany izay, afaka manohy mandavaka sy mamerina manamboatra andalana izy ireo.24 Okt 2020
Misy ve ny Netflix?
Rampage| Streaming izao |Netflix.19 Okt 2020
Hisy Red Bull Rampage 2021 ve?
Miaraha aminay amin'ny 10/25 /2021
Raha tsaraina amin'ny mpifaninana taloha, ireo atleta 21 nasaina dia nahita faritra hetsika vaovao misy safidy terrain voajanahary kokoa noho ny taona vitsivitsy - namerina ny andiany faha-14 an'nyRampageamin'ny fakan'ny mitaingina tendrombohitra lehibe, manta ary tsy voalamina.izanydia eo amin'ny efatra kilaometatra mankany amin'ny toerana hanaovana ny fifaninanana amin'ny tany lemaka karakaina.
Nisy maty tao Redbull Rampage ve?
Jordie Lunn avy any Canada no mifaninana mandritra ny lalao famaranana ao amin'nyRampage Mena Mena, fifaninanana fanasana ho an'ny irery sy ilay hetsika bisikileta an-tampon'ny tendrombohitra manerantany maimaim-poana eran'izao tontolo izao amin'ny 26 Oktobra 2018, any Virgin, Utah. LunnMATYAlarobia tamin'ny fianjerana tany Cabo San Lucas, Mexico.11 Okt 2019
Aiza ny Red Bull Rampage 2021?
Miaraha aminay amin'ny 25/25/2021
Ny tany mitaky tokanaVirjiny, Utah, dia miantso indray ireo mpitaingina bisikileta an-tendrombohitra tsara indrindra any an'efitra mba hifaninana amin'ny voninahitra amin'ny iray amin'ireo fitsapana lehibe indrindra amin'ny fahaizana sy ny tsinay eto amin'izao tontolo izao.
Nofoanana ve ny fanaovana an-keriny Red Bull?
Androany,Red Bullnanambara tamin'ny fomba ofisialy nyfanafoananaamin'ny taona 2020Rampage Mena Mena, fifaninanana freeride voalohany eran'izao tontolo izao, noho ny fanamby natolotry ny Covid-19. Ankehitriny, dia andrandrainay fatratra ny antsipiriany amin'ny fanontana 2021, raha i Virgin, Utah dia antenaina fa ho lasa ivon'ny tontolon'ny bisikileta an-tendrombohitra.02.09.2020
Sehatra inona no mirongatra?
JereoRampage| Prime Video.
Misy ve ny fanararaotana ao amin'ny Netflix Canada?
Eny,Rampageefa azo ampiasaina amin'nyNetflix Kanadiana. Tonga tamin'ny fandefasana an-tserasera tamin'ny 10 Mey 2020.